Lubummaan koreen hundeesitoota mana lubummaa Oromiyaa qabameera jedhe Qulqulluu Sinodosiin - BBC News Afaan Oromoo
Lubummaan koreen hundeesitoota mana lubummaa Oromiyaa qabameera jedhe Qulqulluu Sinodosiin
Madda suuraa, Feesbuukii Barsiisaa Haayilemikaa'el Taaddasaa
Barsiisaa mana amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa Haayilemikaa'el Taaddasaa
Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A.L.I Guraandhala 9 bara 2012 taa'amaa ture har'a sa'a booda xumuramuun ibsa kennaniiru.
Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan qabxiilee kanneen gadii irratti ejjennoo sinodosichaa ibsaniiru.
Koree hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa
Phaaphaasichi koreen hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa jechuun socho'u seeraan alaa fi beekamtii mana amantichaan ala tahuu ibsan.
Danbii fi beekamtii mana Amanataa Kiristaanaan ala ka'uun mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf Qulqulluu Sinodosii irraa Tsinaatsilli eebbifamee nuuf kennameera jechuun Mana Lubummaa hundeessineerra kanneen jedhan:
1 Luba Balaay Mokonnin
2 Abbaa Gabramaariyaam Nagaasaa
3 Barsiisaa Haayilemikaa'el Taaddasaa
4 Luba Badhaasa Tolaa
Manni Lubummaa Oromiyaafi kutaaleen lallabaa Oromiyaa walii galan
Beekamtii bataskaanaan ala amantoota waliiwallachisuun 'barumsa gantummaa' barsiisaa turuun isaanii ragaadhaan deeggaramee Qulqulluu Sinodosiif gahuu isaa hordofee gochaa isaanii kana irraa akka of qusatanii fi dhiifamaan gaabbanii hanga deebi'anitti Guraandhala 11/2012 irraa eegalee lubummaan mana kiristaanaa irraa isaaniif kenname qabameera jedhan.
Namootni olitti eeraman kunneen mana amanataa kiristaanaa keessatti sochii tokko iyyuu akka hin goonee fi tajaajila afuuraas akka hin kennine ibsaniiru.
Namootni kunneen balleessaa isaanii irraa gaabbanii yoo deebi'an dhimmi isaanii irra deebi'uun ilaalamuu danda'a jedhan.
Qulqulluu Sinodosiin namoota jedhaman kanneeniif tsinaatsilli kenname akka hin jirres yaadachiisee, amantootni namoota akkasii ofii dogpogoranii nama dogogorsan irraa amantii isaanii fi danbii bataskaana isaanii yeroo kamiyyuu caalaa eeggachuu qabus jedhan.
Madda suuraa, Sergei Fadeichev
Paatiriyaarkiin duree waldaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas
Koree hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa keessaa tokko kan tahan barsiisaa Haayilemikaa'el murtoo isaan irratti darbe BBCtti himaniiru.
Barsiisaa Haayilemikaa'el lubummaan koree sochii gochaa jiruu akka qabamu, tajaajilli mana lubummaa Oromiyaan kennamu akka dhaabbatu, dameen mana lubummaa Oromiyaa keessatti banamaa ture akka cufamu fi hoggantoota mana lubummaa Oromiyaa irratti himannaan seeraan akka banamu murtaa'uu beekna jedhan.
Murtoo darbe ilaalchisee ammoo barsiisaa Haayilemikaa'el loogii of keessaa qaba jedhan. Miseensonni Sinodosii guutuun hin argamne jedhanii murtoo kana miseensonni dabarsan 78 keessaa 25 qofatu murtoo kana irratti argame jedhan.
Dabalataan loogiin sabaas jira jedhan. Naannoo Tigiraay irraa miseensonni hirmaatan nama lama qofa tahuu himanii isaan keessaas sochii mana lubummaa Oromiyaa kan morman nama tokko qofadha jedhan.
Miseensi biraa Oromiyaa irraa hirmaatan tokko 'ani abbaa uummataa' waan taheef murtoo kana hin fudhadhu jedhanii ijoollee kana ofitti qabnee karaa nagaa hiikamuu qaba jechuun himan jedhan barsiisaa Haayilemikaa'el.
Murtoon darbe dhiibbaa fi loogii sanyummaa miseensota naannoo Amaaraa irraa argamaniin darbe jedhanii kun miseensota naannoo Oromiyaa mufachiisa jedhan.
Murtoo kana hordofee barsiisaa Haayilemikaa'el abaarsaa fi jibba nurratti labsame kana nuyi jaalalaan deebisna jedhan.
Miseensonni keenyas murtoo keenya obsaan nu eeguu qabu jedhanii rakkoon tokko iyyuu akka uumamu hin barbaannu jedhan.
Kanaaf karaa dhaaba waloo keenyaa irratti mari'annee ibsa kenninaaf jedhan. Gama keenyaan hanga murtoo jiru dhagahanitti gara tarkaanfii kamiittuu hin galle barbaanna jedhan.
Amma dhugaan isaa barameera kan jedhan barsiisaa Haayilemikaa'el amana Oromoo mana kiristaanaa keessaa baasuuf dhiibbaa siyaasaa gaggeeffamaa turedha jedhan.
''Barsiisa Haayilemikaa'el, lallaba Luba Balaay hin barbaadu jedhudha dhimmichi. Dhugaa qabannee uummatni keenya afaan isaan haa tajaajilamu jennee, karri mana kiristaanaa nuuf haa banamu jennee, manni kiristaanaa nuuf haa babbal'atu jennee abaaramuu keenyaan eebba arganneerra.''
Mana amantaa akka imbaasii siyaasaatti itti fayyadamamaa tureera jedhanii murtoon kun carraa tajaajilaa nuuf bal'isa jedhan.
Dabalataan Siinodosi Qulqulluun ibsa kenne keessatti bakka waaqeffannaa waliin wal qabatee walitti bu'insa yeroo darbe magaalaa Finfinnee naannoo 22 jedhamee beekamutti uumameen lubbuu namaa darbeef yakkamtootni seeraan gaafatamuu akka qabanis himaniiru.
Imireetota wal tahan keessatti mana kiristaanaa banuuf lafa gaafachuu turuu ibsuun hojii MM Abiy Ahmad hojjetaniin amma milkaa'uus ibsaniiru.
MM Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufanii hojii mana amantichaa akka hojii dhunfaa isaaniitti fudhachuun hojjechaa turuu ibsuun Qulqulluu Sinodosichi galatas dhiyeesseeraaf.
Luba Balaay Mokonnin: Manni Lubummaa Oromiyaa kutaalee lallabaa Oromiyaa keessaan waliin hojjechuuf walii galan
1 Fuulbaana 2019
Magaala Finfinnee dirree walmorkii ijoo filannoo - 2021